Natsiridza yako yekunyora maitiro: zvine musoro zvinongedzo
Yakatumirwa ne Tranquillus | Feb 10, 2021 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Logic zvinongedzo zvekunyora zviri nani zvehunyanzvi
Iwe unogona kunyora akawanda emaemail pazuva. Kusvika ikozvino, kwauri, kunyora kwave kunyanya kuperetera, girama, conjugation. Kunyangwe tikazvidzidza zuva nezuva. Apa handipo paunoda kuti uise pfungwa dzako pakuedza kwako izvozvi. Paunogadzirira a E-mail, mushumo kana kunyanya chero mhando ipi zvayo yekunyora. Une pfungwa yekuti pane chakaipa. Ichi chinhu chidiki chinoshaikwa chatinowana mumagwaro epamutemo, mapepanhau, mabhuku. Mutsara wemazwi, kutevedzana kwemazwi, kushandiswa kwekutaura zvinova zviratidzo zveavo vane hunyanzvi hwekunyora. Tanga kushandura kunyora kwako nekushandisa kwakasimba kupfuura zvinojairwa zvine musoro zvinobatanidza.
Zvinonzwisisika zvinongedzo zvei?
Ichi ndicho chikonzero nei, zvakadaro, zvakadaro, mukusiyana, nenzira ye ……. Zvinonzwisisika zvinongedzo ndiwo mazwi anofanirwa kushandiswa kugadzira chinyorwa. Kunyanya kusimbisa kubatana kunonzwisisika pakati pezvinhu zvakasiyana-siyana zvemashoko ako, zvemutsara. Chii chinokonzera izvi Chero ani anakuverenga anonzwisisa mazwi ako pasina kujeka.
Chikamu chemutauro wekushandisa
Kunyangwe zvakadaro, kufunga uye chiperengo chemavara ako hazvigoneke. Izvo zvinokwanisika kuti yakarongeka kudzokorora kwemazwi akafanana. Nekudaro, inoipa iko kutarisa kwakaomarara. Naizvozvo unofanirwa kuverenga zvekare zvinyorwa zvako zvinotsiviwa semuenzaniso asi na: zvisinei, zvakadaro, kune rimwe divi, nezvimwe. Iko kushandiswa kwechibage hachisi chokwadi mhosva pachayo. Pasinei nezvose, kushandiswa kwezvibatanidza zviri zverejista inotsigirwa. Pakarepo wedzera imwe yakanatswa, yehunyanzvi kubata kune yako zvinyorwa. Mhando dzakasiyana dzemazwi ako dzinoperekedzwa nemitsara mazwi anoyerera achienda pasina kana kudzokororwa kudiki Isu zvirokwazvo tichasimudzira kuendesa kwakanaka kweruzivo iwe rwaunoshuvira kuparadzira.
VERENGA Ban kuperetera zvikanganiso pabasa
Rondedzero yezvibatanidza zvine musoro zvekuita zviri nani kuenderana kwemavara ako
Heino runyorwa rwezvibatanidza zvekushandisa mumaemail ako, mareport uye zvimwe zvekunyora. Nekuibata nemazvo ungafambisa kuverenga nekunzwisisa kwakanaka kwemagwaro ako. Zviripachena kuti zano rakakura, risingazobatwe nemunhu, rinokurumidza kukanganikwa nevakuru vako.
Kukwanisa kutaura izvozvo
Mune mamwe mazwi
Ichi ndicho chikonzero nei.
Mune maonero aya
Pane rimwe divi
Kubva pano maonero
Nekutevera iyi fungidziro
kana zvisina kudaro
Natsiridza yako yekunyora maitiro: zvine musoro zvinongedzo July 25th, 2021Tranquillus
pashureUchapupu hwenguva yekuwedzera: mushandi haafanire kuratidza chero mabhureki
zvinoteveraIva Mutariri Wenzvimbo uye upe kukurudzira kutsva kumabasa ako
Mumwe nemumwe anogamuchira ane fomula yakakodzera!
Tsamba template yekumhan'ara chikanganiso pane payslip yako
Iwe unodzivirira sei zviperengo zvikanganiso pabasa?